Mpamorona sary lehibe indrindra amin'ny tantara | Famoronana an-tserasera
Mpamorona sary lehibe indrindra teo amin'ny tantara
Mary Rose | | maro
La ImportANCia de ny dia ataovy hoe:ñadvavaka gráficos a lo lehibeo de la mpahay tantaraia de la olombelonaidad es toy izany Grande de ny una de Las MPAMPIANATRAesIones de tsy misy to beían posible tsy misy ellos. Ny zavakanto amin'ny famolavolana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny kolontsaina ankehitriny.
Tena ilaina ny mahafantatra sy mahafantatra bebe kokoa momba ireo mpamorona sary manan-danja indrindra amin'ny tantara raha ny momba ny fakana references amin'ny famoronana sy famolavolana, satria ny ankamaroan'ny mpanakanto dia nahazo aingam-panahy avy amin'izy ireo. Eto izahay dia milaza aminao bebe kokoa momba azy ireo.
1 Mpamorona sary lehibe indrindra teo amin'ny tantara
1.1 Saola bass
Mpamorona Instagram 4 hanaraka ho an'ny aingam-panahy
Nanao fifantenana mpamorona sary fito izahay izay niteraka fiantraikany lehibe teo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny tamin'ny famolavolana azy ireo. Eto izahay dia milaza aminao bebe kokoa momba azy ireo.
Shaolo basse fue un ilUstradara y dia ataovy hoe:ñniankohoka gráfico estadounidnape, fianakavianaOso ny su trabtongolo gasy amin'ny el cary ny famolavolana ny sasany amin'ireo orinasa lehibe indrindra any Etazonia. Teraka tao New Haven, Connecticut, tamin'ny 8 Febroary 1920 ary maty tany Los Angeles, Kalifornia, tamin'ny 25 Aprily 1996.
Ny asany voalohany dia nahitana ny famolavolana afisy sarimihetsika ho an'i Alfred Hitchcock, The Man with the Golden Arm, ary The Girl Can't Help It. Kleenex, Minolta, Warner Communications, na AT&T.
Loharano: Milton Glaser
Milton Glaser dia mpanao sary sy mpamorona amerikanina malaza indrindra amin'ny famolavolana rakitsoratra sy boky. Izy no mpiara-manorina ny PushPin Studios. Izy no nanangana ny New York Magazine. Nanokana ny tenany tamin'ny famolavolana afisy izy, anisan'izany i Bob Dylan malaza, famolavolana rakitsoratra, famolavolana lahatsoratra ary ny maha-orinasa azy. Namboarin'ny gazety toy ny La Vanguardia ihany koa izy. Iray amin'ireo endrika malaza indrindra nataony ny logo I Love New York. Niasa tamin'ny boky toy ny Paris Macht, L'Express, Esquire na ny Village Voice izy. Izy no mpamorona sary voalohany nahazo ny mari-pankasitrahana National Medal of Arts.
Raha ny fomba fanaony dia azo lazaina fa tena mahay mandanjalanja izy. Milton Glasser dia fantatra amin'ny fampitana amin'ny singa vitsivitsy, foto-kevitra marobe, ao anaty sombin-tsary tokana. Avy amin'ny vanguards sy teknika samihafa ny fitaoman'izy io, izay ivondronan'ny lahatsoratra sy ny sary.
Paula Scher es una amin'ny endrikañadNy zavakanto an-tsary Amerikana malaza indrindra eran-tany. Nianatra Fine Arts tany Pennsylvania tao amin'ny Tyler School of Art ao Elkins Park izy. Izy no talen'ny orinasa mpamorona Pentagram voalohany, izay nidirany tamin’ny 1991. niasa ho mpanjifaes fro Charles Bronson, Coca Cola, Shake Shack, Perry Ellis, Museum of Modern Art, The vaovao yorkers, Windows ankoatra ny hafa.
Tamin'ny taona 80 dia namolavola ny fomba fanaony manokana izy, izay nahazo aingam-panahy avy amin'ny Art Deco sy ny Constructivism Rosiana. Namokatra marika orinasa marobe toy ny an'ny City izy, nanamboatra fonon-boky, fonosana ary dokam-barotra ihany koa. Tena mampiavaka azy ny fomba fanaony ary asehon'i Scher amin'ny endritsoratra, izay anamboarany sary tena mahery sy manavao.
Paul Rand es uno de ny mtahaka ny fianakavianaosos dia ataovy hoe:ñadvavaka gráficos de la mpahay tantaraia. Nantsoina ho rain'ny famolavolana sary maoderina, manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana marika sy logo izy, y una de Las aviavyuras mtahaka ny zava-dehibees do dia ataovy hoe:tsy misy gráfico en Estados UnidU.S. Paul Rand dia teraka tamin'ny 15 Aogositra 1914 tao Brooklyn, New York. Nianatra tao amin'ny Parsons The New School for Design izy tamin'ny 1932 ary tao amin'ny Art Students League tamin'ny 1933. Talen'ny zavakanto ho an'ny gazetiboky Esquire izy. y avy amin'ny Apparel Arts-GQ.
Raha ny fomba fanaony, dia azo lazaina fa modernista miaraka amin'ny fampiasana ny typography sy ny endrika geometrika. Paul Rand dia voataonan'ny fomba alemà Sachplakat sy ny asan'i Gustav Jensen. Izy no namorona ny maha-orinasa ho an'ny orinasa malaza toy ny IBM, ABC, UPS, Enron, Manaraka, ankoatra ny hafa.
Loharano: David Carson
David Carson dia mpamorona sary sy talen'ny zavakanto amerikana. Talen'ny zavakanto tao amin'ny gazetiboky Ray Gun izy. Teraka tany Texas, Etazonia izy, tamin’ny taona 1955. Anisan’ny nahaliana azy ny manao surf, ka nahazoany laharana faha-9 maneran-tany. Ity mpamorona ity dia fantatra amin'ny manavao amin'ny typography andrana sy teknika sary hafa. Nanana manokana momba ny famolavolana editorial sy audiovisual izy, na dia nanamboatra afisy sy rakikira mozika ihany koa aza.
Nahazo fiofanana avy amin'ny mpamorona sary Hans-Rudolf Lutz ihany koa izy, fantatra amin'ny fahasamihafan'ny endrika sy ny fianarany amin'ny sehatry ny typography. Ny ampahany amin'ny fitaoman'i Carson dia avy amin'ity mpanakanto ity, ankoatry ny surf, sary, sosiolojia ary famolavolana sary.
Mpamorona amerikanina izy ary mpisava lalana teo amin'ny sehatry ny famolavolana sary momba ny tontolo iainana. Teraka tamin’ny 26 May 1931 tany Brooklyn, New York izy. Nanomboka ny asany ara-javakanto tao amin'ny Ligin'ny Mpianatra Arts any New York izy, ary nianatra tao amin'ny Bard College any New York. Farany, nahazo diplaoma tamin'ny famolavolana sary tao amin'ny Institute of Design any Chicago izy. Niasa tamin'ny fianarana Charles sy Ray Fames izy. Nakambanany tamin'ny rafitra ara-javakanto sy ho an'ny daholobe ny endrika sary.
Tamin'ny 1968, nanapa-kevitra ny hanokatra ny studio ao Santa Monica izy. Natsangan'i Frank Gehry sy Gere Kavanaugh, nantsoina hoe Deborah Sussman & Co. Nandritra io vanim-potoana io, niasa tamin'ny tetikasa maherin'ny 340 izy ireo. Niara-niasa tamin'ny mpanao mari-trano toa an'i Philip Johnsons, Olin ary Barton Myers izy. Ny iray amin'ireo tetikasany malaza indrindra dia ny famolavolana ny endrika sy ny tontolon'ny maritrano ho an'ny Lalao Olaimpika fahavaratra 1984 tany Los Angeles.
Alexander trochut es uno de ny dia ataovy hoe:ñadvavaka gráficos sy typographic mtahaka ny zava-dehibees de nuaingam-panahy padia. Nianatra tao amin'ny Elisava, University School of Design and Engineering of Barcelona izy. frsnsó hfiolahanaendo ilUstFMIIones for libRosa de lahatsoratrao y for agencias de -bahoakaidad. Su fiararera se ha dearhoronan-taratasyado en nydo el mundaro, y Niasa tamin'ny marika manan-danja izy, toy ny The New Yorker magazine, Penguin Books, Saks Fifth Avenue, Nike, Pepsi, Puma na The Rolling Stones.
Nipetraka nandritra ny fotoana kelikely tao Barcelone izy izay nananany studio design, saingy nifindra tany Brooklyn, izay niasany tamin'ny portfolio-n'ny mpanjifany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Mpamorona sary lehibe indrindra teo amin'ny tantara
Salama, hitako fa mahaliana ny safidinao fa mitongilana, mpamorona amerikana ihany no anarany. ary tsy Etazonia irery izao tontolo izao. misy firenena maro eran-tany.
Sary 3D ho an'ny vao manomboka
Hafatra mahafinaritra ho an'ireo afisy